Ngaba Uyayazi indlela embi ngayo Igumbi lokuhlambela
Ikhaya / Blog / Ngaba Uyayazi Ukuba Ikhohlakele Kangakanani Igumbi Langasese? Fumana uMthombo oLungileyo wokuLungisa!
2020 / 10 / 22 uhleloBlog 2083 0
Uyazi ukuba livumba elibi kangakanani kwigumbi lokuhlambela? Ngokophando, ivumba langasese kunye nevumba kunokwenzeka ukuba kubangele isifuba, i-bronchitis, irhashalala, kunye nesifo sentliziyo kunye nezinye izifo eziphambili.
Okona kubi kukuba abantu bachitha ubuncinci iminyaka emihlanu yobomi babo kwigumbi lokuhlambela, besebenzisa indlu yangasese ngaphezulu kwemizuzu eli-15 ngosuku, phantse iiyure ezimbini ngeveki, nto leyo elingana neminyaka emihlanu yobomi babo ingqongwe “ziigesi eziyityhefu”, cinga malunga nazo zonke izinto ezimbi!
Kukho izinto ezine eziPhosakeleyo malunga nokuCocwa kwegumbi lokuhlambela
Ukupheliswa kwendalo kwindawo yangasese kukho ukungaboni ngasonye, ​​makhe sijonge.
Intsomi # 1.
Akukho Mpembelelo kwiMpilo yaBantu
Isitshixo somntu esivelisa ivumba ikakhulu sine-ammonia, i-hydrogen sulfide, i-uric acid kunye nezinye iigesi eziyingozi, ngakumbi i-hydrogen sulfide, ukuphefumla ixesha elide kuya kubangela ukwehla kokungakhuseleki komntu, kuvuselele imvakalelo yokujoja kunye namalungu abonakalayo, kulula ukwenza ilungu lingaphenduli, Ndindisholo, ingakumbi kubantu abadala, abafazi abakhulelweyo, abantwana ukwenzakala ngakumbi
Ngokwesiqhelo iFan Exhaust Fan
Idilesi yeVumba kunye noNgcoliseko lweNtsholongwane
Umsi wokukhupha umoya ungadlala indima endaweni yokuhlanjwa kwomoya kwigumbi lokuhlambela, kodwa ngenxa yokuba ifeni yokukhupha iphezulu, uninzi lwezinto ezinobunzima nobunzima bezinto ezinobuthi azinakukhutshwa ngale ndlela: Iibhaktheriya ziqhotyoshelwe ezindongeni, iitawuli neenwele. ibrashi kunye nezinye izinto, akukho lula ukuyikhuphela ngaphandle ngenxa yokuphuma kwefeni.
Iphelisa iiVumba zegumbi lokuhlambela.
I-Aromatics kunye ne-fresheners yenzelwe ukugubungela ivumba elikhethekileyo ngokukhupha ivumba, kwaye ayinakuphendula ngeegesi ezibangela ivumba elikhethekileyo, njenge-ammonia kunye ne-hydrogen sulfide, kwaye azinakubola okanye zisuse iigesi eziyingozi.
Ukongeza, uninzi lweearomatics ziqulethe iringi ye-benzene, i-aldehydes kunye nezinye izinto, ukusetyenziswa kwexesha elide kunokubangela ityhefu engapheliyo, kwaye kukhokelele kumhlaza.
Ukuqaqamba okumbalwa okuya kwenziwa.
Ukuzikhupha, sinuka ivumba lelindle elikhutshiweyo xa ivumba ligcwele umngxunya wonke wendlu yangasese laza lasasazwa kwigumbi lokuhlambela, ukuba ngeli xesha lokugungxula, ngalo mzuzu inkanyamba iya kuvelisa umngxunya wendlu yangasese yegesi enukayo kunye neentlobo ngeentlobo zeentsholongwane igumbi lokuhlambela kwaye ngqo kwindawo yokuphefumla yomntu, ecaphukisa imithambo-luvo, inokukhokelela kwizifo ngokulula.
Livuka phi ivumba lokuhlambela kwaye ungalisombulula njani?
1, ivumba Umthombo:
Imijelo yamanzi emigodini
Unxibelelwano ngumbhobho wokuhambisa amanzi, osebenza njengesithintelo ngokuchasene nevumba kunye nezinambuzane ezincinci eziphaphazelayo. Kule mihla, kukho uhlobo lwe-U kunye no-T-type floor drain kwimarike. Uhlobo lwe-u drain luzahlulwe lube ngamanzi amdaka etywina lomgangatho wamanzi kunye nomjelo wamanzi anzulu wobushushu ngokobude begophe lokugcina amanzi. Xa amanzi kwindawo yokugcina aguqukileyo anyamalale kwaye ayoma, ivumba ledreyini liza kunyuka.
Xa amanzi edreyina, amandla omxhuzulane aya kunyanzela isitywina ukuba siqhekeke, kwaye amanzi aya kubuyela kwindawo yayo yantlandlolo emva kokudubula, kunye noyilo lomazibuthe luya kuyibamba ngokuqinileyo. Ngokwe-airtightness: I-T-drain yomelele kune-U-drain, ukuba umjelo womgangatho unephunga elibi, into yokuqala ekufuneka uyiqwalasele kukuba i-U-drain iye yawakhupha amanzi, kwaye kufuneka uthele amanzi kuwo kuphela ukuyenza ingangeni moya.
(1) Inye kukutshintsha, ukuba umbhobho wokuhambisa amanzi ngumgangatho oyi-50mm, okanye itywina lomsele awumxinzelelekanga, okanye wonakele, uwuthathe endaweni yentsimbi yomgangatho ophakamileyo.
(2) Okwesibini, tywina, ukuba kukho umsantsa phakathi kwetywina lamanzi kunye nesitya, dlala iglu yeglu ukuyitywina.
(3) Ukubulala iintsholongwane, galela isibulali-zintsholongwane kumchiza wokunyibilika ukuze unyibilikise intsalela enje ngeenwele zebhafu.
(4) Ukugungxula, okuhlala kunebhakethi elincinci lamanzi, gungxula umjelo womgangatho, intsalela edreyini iya kugutyulwa, kwaye iqinisekise ukuba amanzi atywina amanzi.
(5) Jonga ikephu yomoya yombhobho wamaphepha ophahla ukuze ubone ukuba ayivalwanga yinkunkuma, kwaye ukuba kunjalo, yicoce.
2, Imithombo yeVumba:
Hlamba umsele wamanzi
(1) Isinki yombhobho omdaka wokuntywila ufakwa ngqo kwindawo yangaphantsi kwaye ujongano alutywinwanga, lubangela umbhobho wokuhambisa amanzi ubuyele kunambitha.
(2) Akukho ndawo yogcino lwamanzi kwisitya sokuhlambela esisezantsi kumbhobho, okukhokelela kwivumba lokubuyela.
(3) Ukuhlamba iinwele kunye nezinye iintsalela zikhona eludongeni lombhobho kufutshane nendawo yokugcina amanzi, zisiba mbi emva kwexesha elide, ukuyilwa kwevumba, okukhokelela ekubuyeni kwevumba.
(1) Faka isitya sokuhlambela umbhobho omdaka omdaka kumbhobho wokudibanisa ukwenza itywina lerabha kunye nokuvimba ivumba lokubuyela.
(2) njengesitya sokuhlambela esingaphantsi kwempompo yedreyini ayigcinwanga ukugoba amanzi, kunokutshintshwa umbhobho kunye nekhoyili, ukwakheka kokugoba kwamanzi, ukuvimba umjelo wevumba lokubuyela.
(3) ukucoca ubuso beenwele kunye nezinye iintsalela xa uhlamba, sukuzivumela ukuba zihlale kufutshane nendawo yokugcina amanzi eludongeni lombhobho.
3, Umthombo weVumba: iTywina yangasese (Flange) yangasese kunye noQhagamshelo lwePipe yokuGutyula, Kukho iTywina, ekwabizwa ngokuba yiFlange. Uninzi lwevumba lokuhlambela, alufakwanga ngenxa yetywina elenziwe.
(1) Susa indlu yangasese kwakhona kwaye ufake kwakhona itywina.
(2) Ukuba iithayile zomgangatho ojikeleze indlu yangasese zinemingxunya, lungisa kuqala iithayile ezi- mngxuma, uze ulungise unxibelelwano phakathi kwendlu yangasese kunye neetayile zomgangatho.
(3) Emva kwendlu yangasese, gubungela kwangoko ikhava yangasese.
(4) uhlala esebenzisa amanzi ukuhlamba indlu yangasese, ukuze ukugoba kwamanzi kungagcinwa emanzini afileyo, kumanzi amoshakeleyo.
(5) Rhoqo sebenzisa iarhente yokucoca imichiza (engeyo-asidi) ukucoca indlu yangasese.
4, Imithombo yevumba.
Iinwele kunye nezinye iintsalela ziyanuka Ukuhlamba iinwele kunye nezinye iintsalela, kungena kumsele wokuhambisa amanzi kumsele wokuhambisa amanzi, intsalela yexesha elide eludongeni lwedreyini, ukonakala kunye nokunuka, okukhokelela ekubuyeni kwevumba.
(1) Ukucocwa rhoqo kwentsalela yegumbi lokuhlambela.
(2) Bulala iintsholongwane rhoqo ukuze ubulale iintsholongwane.
Ngaphambili :: Ukulungiswa kwesipili segumbi lokuhlambela, iipesenti ezingama-99 zaBantu ziya kuyityeshela le nkcukacha next: Ukuncoma okungaphezulu kwe-10,000 kuYilo lweGumbi lokuhlambela.